ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ်…
Posted by uncle kyaw on Mar 4, 2012 in Copy/Paste | 21 comments
ကိုယ်တိုင် ဖြတ်သော ဆေးလိပ်.
သူများတွေက သူတို့သိတာတွေရေး…ကိုယ်က ဘာမှမသိတော့ ကိုယ်သိတာ ကိုယ်ရေးမှာပေါ့…ရွာထဲ ရေးချင်လို့ ဖတ်ချင်လို့ မန့်ချင်လို့ ဝင်လာတာ..အညံ့တော့ မခံနိုင်ပေါင်…တစ်ချို့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တဲ့ ရွာသားတွေများရှိရင်လည်း နည်းပေးလမ်းပြလေး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတာလေးလည်း ပါတာပေါ့..
ဆေးလိပ်စသောက်တော့ အသက် ၁၆ နှစ်ကျော်ကျော်…ဘူး ထ တတ်ခါစ အရွယ်..ဆေးလိပ်လက်ကြား ညှပ် အဟုတ်ကြီးမှတ်..မီးခိုးလေးမှုတ်ထုတ် အတော်ဟုတ် ခဲ့တယ်လို့ ထင်ခဲ့တာလေ…၃လိပ်ကို တစ်ကျပ် နဲ့ ခေါင်းမူးသွားပြီ ဒူးယားသည်ရေ …ဆိုတဲ့ခောတ် မမှီလိုက်ပေမဲ့ ရွှေဒူးယားတစ်ဗူး ၁၅ ကျပ်လောက် က ဖြစ်မယ်…မိဘ က မုန့်ဖိုးပေး ..ဆေးလိပ်လေး ဝယ်ခဲ..တယ်ဟုတ်တဲ့ငါ ပါလားပေါ့..မှန်ရှေ့ရပ်ပြီးတောင် စတိုင် လုပ်ကြည့်ခဲ့သေး ..ရွှေဒူးယားလေး ခဲလိုက် မုန့်ဖိုး နည်းရင် အဲဒီခောတ်က လူငယ်တွေ အကြိုက်များတဲ့ နေခြည်ဆေးပေါ့လိပ်လေး ကျောင်းလွယ်အိတ်ထဲ ဆောင်ထားလိုက် …ခါးလည်းခါး နံလည်းနံ ကြိတ်မှိတ်သောက်..ဖွာ..ကဲ ..၂ လလောက်လဲ ရောက်ရော..ခါးတဲ့အရသာလေး ကြိုက် ..မီးခိုးနံ့လေးကမွှေးလာတော့တာပါပဲ…ဒီလိုနဲ့ ဆေးလိပ်စွဲရောဆိုပါတော့..ဆေးလိပ်လေး ဖွာလိုက်…ကျောင်းစာ မလုပ်ပဲ ဘူး ထ လိုက်..ကျလိုက်တဲ့ ၁၀ တန်း တစ်ဖုန်းဖုန်း…အဲဒီခောတ်က အေ ဘီတွေ ခွဲထားသေးတယ်..ဘီနဲ့ ၂ ခါ ပါလာတော့ ပျင်းသွားပြီ။။ဒီနေ့ထိ ကို ပြန်မဖြေတော့ဘူး ..မှတ်ကရော…ဒါနဲ့ပဲ အပြင်မှာအလုပ်ကလေး စပြီး လုပ်ခဲ့ရာက ဝင်ငွေလေးနဲ့ ဖြစ်လာတော့ ချ တော့တာပေါ့..lucky strike, benson, xinxing, marlboro, denhill, ဈေးကွက်ထဲရှိသမျှ လာထား 555, montary , ဆေးပေါ့လိပ်ဆိုလည်း..နေခြည်၊ ငွေနဂါး ၊ ငွေတောင် ၊ စုံအောင်ချတော့တာပဲ…ဆေးလိပ်သမား စကားပုံတွေတောင်ရှိသေး..နေခြည်ဆေးလိပ် ၊ဖင် က ပိတ် ၊ မောလို့နားနေ မီးက သေ ၊ ကြာကြာဆက်သောက် အသက်ပျောက် ..တဲ့ ..နောက် ထိပ်ဖျားကနေ တံဆိပ်နားအထိ အရသာရှိတာ ဘာညာ ဘာညာ ပေါ့ အစုံပါပဲ။ ကံကောင်းတာလား ကံဆိုးတာလားတော့မသိဘူး ဝင်ငွေလေးက ဖြောင့်နေတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ စိတ်ကူး ကိုမရှိဘူး..သောက်ခါစ တစ်ရက် နှစ်လိပ်လောက် ဝါရင့်လာတော့ ၅လိပ် နောက် ၁၀ လိပ် နောက် တစ်ဗူး (၂၀)လိပ် ဘောင်းဘီအိပ်ကပ်ထဲ london ဗူးလေးထည့် zippo မီးခြစ်လေး ထောင် ကနဲနေ အောင်ခြစ် ..တွေ့တဲ့သူငယ်ချင်း ထုတ် တိုက် ..မိုက် သလားတော့မမေးနဲ့..ဒီလိုနဲ့ သောက် လိုက်ဖွာလိုက် ..တစ်ရက်မှာတော့ အဖေ က ငါ့သား မင်းဆေးလိပ်တွေ သောက်တာ လွန်နေပြီ လျှော့ပါဦးတဲ့…ဒါနဲ့ ဟုတ်ကဲ့အဖေ အဖေ အရင် လျှော့ပြီးမှ သားကို ပြောပါလို့ ဆိုတော့ အဲဒီတုန်းက သတိမထားလိုက်မိတဲ့ အဖေ့ရင်ထဲ ကို ခု မှ လှမ်းမြင်မိတယ်…အဖေ ဘာမှ မပြောပဲ လှည့်ထွက်သွားလိုက်တယ်..ဒီလိုနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဆက်သောက်နေခဲ့တော့တာပေါ့…မကောင်းဘူး…မသောက်သင့်ဘူးဆိုတာတော့ တွေးစ ပြုလာပြီ ဆေးလိပ် ဆိုးကျိုးတွေကို နားနဲ့ တော်တော်များများ ကြားလာရပြီ …ငါ တော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးပေါ့ ..သောက်မှာပဲပေါ့..ဒီထဲမှာ စကားလဲ မများတတ်ကြပါ ဆေးလိပ်လေးတွေ ကျွန်တော့် အဖော်ပဲ ဆိုပြီး ရင်ဂို ကလည်း မြှောက်ပေးခဲ့သေးသဗျ…ဒီလိုနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သက်တမ်း ၈ နှစ်ကျော်လာခဲ့ရော..ဆေးလိပ်ဖွာ ရင်း ဆေးလိပ်ဆိုးကျိုး စာ တွေလည်းရှာ ဖတ် နေပြီပေါ့…ဓါတ်ပုံ တွေ စာတွေ ဝေဝေ ဆာဆာနဲ့ရေးထားလိုက်တာ ပြောထားလိုက်တာ ကြောက်စိတ် ခပ်ပါးပါးတော့ဝင်လာပြီ၊ ဖြတ်သင့်ပြီ လို့လည်း တွေးပြီ ဒါပေမဲ့  ကြာပြီလေ ၉ နှစ်နားနီးနေတဲ့ ဆေးလိပ်သောက် သက်တမ်းကို ဘယ်လိုဖြတ်နိုင်တော့မလဲ…ရ အောင်တော့ ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်..နောက်တစ်ခေါက် လာဖတ်ပေးပါဦး …ညဉ့်နက်လာတော့ အိပ်ချင်လာပြီ…အရင် က ဆိုရင်တော့ ဆေးလိပ်လေး ဖွာ လိုက် ရေးလိုက် နဲ့ တော်တော်ဇိမ် ကျမှာပဲ…ခုတော့ ခဏ နားလိုက်ပါဦးမယ်..(အဟီး connection မရတော့တာနဲ့ word file နဲ့ ကော်ပီပြန်ကူးပြီးမှ ပြန်တင်ရတယ်ဗျာ)
“”ဆေးလိပ်သမား စကားပုံတွေတောင်ရှိသေး..နေခြည်ဆေးလိပ် ၊ဖင် က ပိတ် ၊ မောလို့နားနေ မီးက သေ ၊
ကြာကြာဆက်သောက် အသက်ပျောက် ..တဲ့ ..နောက် ထိပ်ဖျားကနေ တံဆိပ်နားအထိ အရသာရှိတာ
ဘာညာ ဘာညာ ပေါ့ အစုံပါပဲ။ “”
ကျနော်က ဆေးလိပ်ကို စသောက်တော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ် တက္ကသိုလ် တတိယနှစ်မှာပါ။၂၀၁၀ တုန်းက သုံးလ
လောက်ဖြတ်လိုက်ပြီးမှ ပြန်သောက်ဖြစ်နေတာကနေ၊၂၀၁၁ ဂျူလိုင်မှာအပြီးအပိုင်ဖြတ်လိုက်တာ။ခုဆို (၈)
Bravo Uncle Kyaw and မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ.
Please share your experiences of difficulties on the way of ” NO to smoke “.
I think it is burning the money in your lungs.
စကားအတင်းစပ် အန်ကယ်ကျော် – ကွန်ပျူတာ ပြသနာ ရှင်းပြီးသွားပြီလား။
အန်ကယ်ကျော်ရော၊ မောင်နာဂရော ဒီလိုမျိုး စိတ်ကို ထိန်းနိုင်ပြီး ဆေးလိပ်ဖြတ်တာ နဲတဲ့ willpower မဟုတ်ဘူးရှင့်။
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆက်လက် ပြီး အဲဒီ willpower စွမ်း နေပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။ :-)
မနှစ်က ဖြတ်လိုက်ပြီးမှ ပြန်သောက်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ခုတော့
မသောက်ဖြစ်တာကြာလာတော့ လူရော၊စိတ်ပါ ပေါ့ပါးတယ်။
ဒါပေမယ့်ဗျာ လဘ္ကရည်ဆိုင်တွေမှာ သွားထိုင်ရင်ကိုယ်က မ
သောက်ပေမယ့် ဘေးကလူတွေက အငွေ့ တထောင်းထောင်း
ရယ်လေ။passive smoker ပေါ့။
ဆေးရွက်ကြီး ဥပဒေကလဲ စာရွက်ထဲဘဲကောင်းတယ်ဗျာ။လက်
တွေ့ မှာ မစွမ်းပါဘူး။
စကား အတင်းစပ်ရင်တော့ ပြောပြပါ့မယ် ဘာဖြစ်လဲသိဘူး ကောင်းနေပြန်ပြီဗျ…ဟို ပို့စ် ကွန်ပြူတာ အထီးလား အမလား ဆိုတာလေ ခုတော့သိပြီ ကွန်ပြူတာက အိမ်က မိန်းမ လိုပဲ ..အလကားနေရင်း စိတ် ထ ကောက်ရင် ကောက်တတ်တာ..မချော့ပဲ ပစ်ထားလိုက်တော့ ကောင်းသွားပြန်ရော…ဝင်မန့်ပေးတဲ့ Instruction တွေ အတိုင်းစမ်းကြည့်သေးတယ် ..တစ်ချို့ခေါင်းစဉ်တွေ Reg: ထဲမတွေ့ဘူး…Registry Booster တစ်ခု ဒေါင်းပြီး စမ်းလိုက်တော့ အိုကေ သွားတယ် ဒါပေမဲ့utmc ဆိုတဲ့ folder တစ်ခု Desk top ပေါ် လာပေါ်နေတယ် ဖျက်လဲ ခဏပဲ Reboot လုပ်တိုင်း ပြန်တက်နေတယ်ဗျ…တခြား ဘာပြသနာမှ မပေးတော့ ပစ်ထားလိုက်တယ်.Willpower တော့ ထိန်းမှာပါဗျာ..
တကယ်က.. ကျွဲနွားသတ္တ၀ါမွေး.. တံငါသည်.. စတဲ့အလုပ်တွေထက်..(ဘာသာရေးဖက်ကကြည့်ဦး) အများကြီး.. လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာ..
ဒါကို.. ဘာသာရေးကလည်း.. ထိထိရောက်ရောက်မဖွင့်ပြဘူး..
ယူအက်စ်အပါအ၀င်..ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေက.. ဆေးလိပ်..စီးကရက်ထုတ်သူတွေကို.. အများးးးးကြီး.. အခွန်ကောက်တယ်..
မြန်မာပြည်လည်း.. ဆေးလိပ်ခုံတွေကို.. ရဲတွေနဲ့.. ၀င်စီးပြီး.. စူပါတက်စ်ကောက်သင့်တယ်..။
သြော်….. သူကြီးရယ် ဒီလိုမျိုးအခွန်တိုးကောက်လိုက်လို့လွယ်လွယ်နဲ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ကြရောလား?????
အစိုးရက အခွန်တိုးကောက်လေ ထုတ်လုပ်သူတွေက ဈေးနှုန်းတက်လိုက်လေ.. ပြည်သူတွေ(ဆေးလိပ်သောက်သူတွေ) ဈေးကြီးပေးဝယ်ယူရလေဘဲပေါ့… ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုး ဆေးလိပ်တစ်မျိုးတည်းတင် မဟုတ်ဘူး ဘယ်ကုန်စည်မှာမဆို ဆိုလိုတာပါ… ဆေးလိပ်သောက်သူတွေအနေနဲ့ လည်း ဆေးလိပ်ဟာ သူတို့ အတွက် နေ့ စဉ်သုံး မရှိမဖြစ် မသုံးမဖြစ်အရာလေ… တခြားနည်းနဲ့ စဉ်းစားပါဦး.. ဒီအတိုင်းနဲ့ တော့
လွယ်မယ်ထင်လို့ လား(သီချင်းစာသားလေးပါ) :-) :-) :-)
•California raised its cigarette tax to 87 cents per pack in 1999 but hasn’t changed it since. Smoking is down 18% since the tax increase.
ဒီမှာ တစ်ဗူး ၄၄၀ ဖြစ်နေလို့
ရန်ကုန်က မှာသောက်နေရတဲ့အထဲ …
သဂျီး တို့ကတော့ … ဟုတ်နေပါဘီ
ကိုဘေးနွား စားသောက်ခွန် တက်ပါစေတော် ….
ဆက်သောက် …ဆက်သောက် …
စီးကရက် တလိပ်လောက်. ….
ဆေးလိပ်လေးများ ကျနော့် အဖော်ပဲ…
ကိုရင်ဂို ထိပ်ဆုံးထွက်တဲ့အခွေထဲက ..ဆက်သောက်
အဲ့သီချင်းက ..ကိုညီထွဋ် ကင်ဆာ
ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ အရင်ဆိုခဲ့တာဗျာ …..
………. အဆုတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုကြတဲ့
ိမာ့ခ်တွိန်းရဲ့ ဟာသ ကလည်း အဲသလိုပါပဲ။
It is easy to quit smoking, because I quit it hundred times.
လို့ဆိုပါတယ်။ ခဏ ခဏ ဖြတ်နေရမှတော့ မပြတ်လို့ပေါ့နော။
ပြတ်နိုင်တာတော့ကောင်းတာပေါ့။ တစ်လောက ရှောသွားတဲ့ နေဝင်းမောင်လည်း နှလုံးမကောင်းမှန်းသိသိနဲ့ ဆေးလိပ်မဖြတ်နိုင်ရှာလို့ ဒီလိုဖြစ်ပုံရတယ်။
အစထဲကမသောက်တာကောင်းပါတယ်မသောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေ ဆေးသောက်လို့ကောင်းကျိုးပေးတာမှမရှိတာကို သိသိကြီးနဲ့ဆက်မသောက်တာ ကောင်းဆုံးပါဘဲ
အမလေး ဒါများလွယ်လွယ်လေး ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တာများ… ကိုယ်ထက်ကြီးတဲ့သူကို ချစ်သူ လုပ်လိုက်.. ဒါဆို ပြတ်ကရော..
ဆေးလိပ်မပြတ်ရင် နားရွက်ပြတ်မယ်လေ……….. ဟိဟိ
ကြီးမိုက် အဖြစ်က ..
နာ့အဖြစ်နဲ့ တူတူပဲဟ …
ကွမ်းစား ဆေးသောက် နှစ်မှုရောက် … ဖြစ်သွားဒါပေါ့ …
ကျွန်တော်၏ ကိုယ်တွေ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်နည်း
ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့ အခါမှာ အမြဲ ခံစားရာက ခံတွင်းချဉ် တာပါ။
ဒါကို မကျော်ဖြတ်နိုင်မခြင်း ဆေးလိပ် ဘယ်တော့မှမပြတ်ပါဘူး။
(ဒါက ဆေးလိပ် ဖြတ်ခြင်း၏ ဒဿန )
ကွမ်းစားပြီး ဆေးလိပ်သောက်ချင်တဲ့စိတ် ခံတွင်းချဉ် တာကို ဖြေဖျောက်
တဲ့အခါ ကွမ်းရဲ့ ဒုက္ခက ပိုလာမယ်။အလွယ်ရတဲ့ ကွမ်းစွဲ သွားတာ အများကြီး
တွေဖူးတယ်။တချို့ဆို ဖွတ်မရ ဒါးမ ဆုံးဆိုသလို ဆေးလိပ်လဲမပြတ် ကွမ်းလဲစွဲ
ဆေးလိပ် ဖြတ်ချင်ရင် နဲနဲတော့ ဒုက္ခခံရမယ်။ကျွန်တော့နည်းက
ရှူ ရှူ ပေါက်တာလေးတော့ ဒုက္ခ ရှိပါ့မယ်။
ဖြတ်ပီဆို ရေပုလင်းလေး တလုံးတော့ဆောင်ပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ချင်လာတဲ့ အခါ ခံတွင်းချဉ်လာတဲ့အခါ
ရေပုလင်းထဲကရေကို တငုံ ငုံ ထားပါ။
မြို မချပါနှင့် ပါးစပ်ထဲ အာခေါင်ညောင်းလာတဲ့အထိပေါ့။
ဒါကို ဂရုတစိုက်တော့ လုပ်ရမှာ။အာခေါင်ညောင်းလာတဲ့အခါ
ခံတွင်းချဉ်တာ ပျောက်ပါလိမ့်မယ်။ ခဏတော့ ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်
ပျောက်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်က ခဏနဲ့ ပြန်ပေါ်မှာပါ။
ခဏခဏ ဆေးလိပ်သောက်ချင်..ခဏခဏ ရေငုံ
ဒီလိုနဲ့ ခံတွင်းချဉ်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ အချိန်ခြားသွားမယ်။
ရေငုံရတဲ့ အကြိမ်လဲ နည်းသွားတယ်။
နောက်ဆုံး ဆေးလိပ် ပြတ်သွားမှာပါ။
ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ ပါ ။ကျွန်တော် Change Smoker ဘဝကနေ
အဲဒီအောက်က e-cigarette နဲ့ဖြတ်တာ.. လူတွေတော်တော်အိုကေတယ်ပြောကြတယ်..။
တလောကတင်.. မဂ္ဂဇင်းတခုမှာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်..။
မြန်မာပြည်ထဲ.. ရှိနေသုံးနေကြသလားသိချင်သား.. ဖြတ်မဲ့သူရှိရင်.. လက်ဆောင်တောင်ဝယ်ပို့လိုက်ချင်သေး..
The modern electronic cigarette’s design was devised by Chinese pharmacist Hon Lik in 2003, though the earliest known description of its concept was authored by Herbert A. Gilbert in 1963.
မြန်မာပြည်မှာ တမျိုးတော့ ရောက်နေပါပြီ